ASUS ROG Zephyrus Duo 15 SE GX551, kilalao izy io ary avo lenta [Famerenana] | Vaovao momba ny gadget
Miguel Hernandez | 10/11/2021 10:00 | General, hevitra
Tsy manana fahafahana hamakafaka sy hijery ireo fitaovana manakorontana toy izany foana isika. Amin'ity indray mitoraka ity dia hampahatsiahy anao izany tsy azo ihodivirana amin'ny Asus Zenbook Pro Duo fitaovana izay nodinihinay ihany koa eto amin'ny Actualidad Gadget ary isotroan'ity Zephyrus Duo ity mivantana amin'ny lafiny famolavolana, fa toy ny mahazatra, mifanaraka amin'ny vahoaka Repoblikan'ny Gamers.
Izahay dia mijery lalina ny ASUS ROG Zephyrus Duo vaovao, solosaina finday misy efijery roa misy fitaovana manafintohina, manome izay ampanantenainy ve izany? Izany indrindra no tiana hodinihina amin'ity solosaina finday ity izay atolotra ho safidy tokana sy manokana eny an-tsena.
1 Famolavolana miavaka sy tsy manam-paharoa
3 Fifandraisana amin'ny betsaka
4 Panel tena tsara sy traikefa multimedia tsara
Famolavolana miavaka sy tsy manam-paharoa
Ny zavatra voalohany nisarika ny sainay dia ny famolavolana azy, na dia nahita fitoviana mitombina aza izahay, araka ny efa voalazanay, miaraka amin'ny rahalahiny amin'ny dikan-teny mpanjifa mahazatra ny Zenbook Duo, dia manana ny toetrany manokana. Azo antoka fa raha ampitahaina amin'ny dikan-teny teo aloha dia tsy misy fiovana firy, fa ny fonony aoriana dia manana ny micro-perforations mahazatra mahazatra amin'ny vokatra Republic of Gamers. ary ny tsipika masiaka, amin'ity fizarana ity ny fananganana dia manome fahatsapana tanjaka ary ambonin'ny kalitao rehetra, ASUS dia mpanamboatra manam-pahaizana hatrany amin'ireo lafiny ireo ary tsy ho latsa-danja ity vokatra ity.
Dimensions: X X 360 268 20,9 MG
lanja: 2,48 Kilogramatra
Tsy dia matevina loatra izy io raha raisintsika daholo ny zavatra rehetra ao anatiny, na izany aza, dia manana haavon'ny fifandraisana ampy izy io. Ny efijery "double" dia miakatra amin'ny toerana mahafinaritra kokoa raha mbola mampiasa ilay fitaovana isika, zavatra izay heveriko fa ilaina. Mahaliana ihany koa ny toerana misy ny "trackpad" nomerika amin'ny ilany farany havanana, noterena amin'ity tranga ity noho ny fihenan'ny habaka ho an'ny fitendry, izay manana fitsangatsanganana ampy sy ny jiro LED RGB mifanaraka amin'ny antenaina.
Ao amin'ny ambaratonga processeur izany ASUS ROG Zephyrus Duo Izy io dia manomboka amin'ny processeur AMD, indrindra ny Ryzen 9 amin'ny dikan-teny 5900HX miaraka amin'ny fampisehoana lalao mifanohitra kokoa, manao sorona ny mari-pana. Izy io dia miaraka amin'ny 32 GB an'ny DDR4 RAM amin'ny 3200 Mhz ary farany, ho an'ny fitehirizana dia tsy misy afa-tsy 0TB NVMe RAID 1 fahatsiarovana mafy orina, mazava ho azy fa amin'ity fitaovana ity dia tsy misy fitaovana voatsimbina ary azo lazaina fa natsipy ny ASUS ROG. ny hena rehetra amin`ny rora, dia sarotra ny mahita fitaovana mitovy.
Tsy lavitra ny GPU, manana a NVIDIA GeForce RTX 3080 130W ary misy fahatsiarovana 16GB GDDR6, Iray amin'ireo karatra grafika ambony indrindra eny an-tsena, natomboka tamin'ny fiandohan'ny taona 2021 tamin'ny modely manokana ho an'ny solosaina finday, afaka milaza isika fa iray amin'ireo safidy tsara indrindra eny an-tsena. Mikasika ny hafainganan'ny fanodinana angon-drakitra, ny NVMe SSD avo roa heny ao amin'ny RAID 0 dia mihoatra ny 7 GB / s ny hafainganam-pandehan'ny famindrana (mihoatra ny antsasaky ny fanoratana). Eo amin'ny sehatra ara-teknika, miatrika ny iray amin'ireo solosaina finday be mpampiasa indrindra sy mahery vaika hitanay eny an-tsena izahay, ary izany Misy vidiny, raha mieritreritra ny hividy azy ianao dia afaka mividy izany amin'ny Amazon miaraka amin'ny tolotra tsara indrindra.
Fifandraisana amin'ny betsaka
Manomboka, toy ny mahazatra, amin'ny seranana ara-batana. Manana seranan-tsambo izahay any aoriana mba hahazoana fampiononana HDMI 2.0b raha te-hanampy monitor faharoa, ary koa seranan-tsambo RJ45LAN ary poireaux USB-A 3.1. Manana seranan-tsambo koa izahay amin'ny sisiny USB-C 3.1DP+PD, miaraka amin'ny seranana roa hafa USB-A 3.1, connecteur audio sy output ary ny adapter power izay manokana amin'ity solosaina ity amin'ity tranga ity. Mazava ho azy fa ny seranan-tsambo USB-C izay Power Delivery dia hanome antsika angovo ihany koa raha tiantsika izany.
Amin'ny haavon'ny fifandraisana an-tariby, ity Zephyrus Duo ity dia nisafidy ny dikan-teny farany amin'ny zava-drehetra, manana WiFi 6 WiFi 6 (Gig +) (802.11ax) 2 × 2 RangeBoost ary Bluetooth 5.1 Na dia manoro hevitra foana aza izahay hilalao amin'ny alalan'ny tariby sy miaraka amin'ny DMZ Host ho an'ny IP an'ny solosaina, ny zava-misy dia ho an'ny lalao ankoatry ny FPS ity WiFi taranaka fahenina ity dia miantoka ny fahatarana eo ambanin'ny 5ms sy ny fifandraisana maharitra 600/600 araka ny fitsapanay manokana. Amin'ity lafiny ity dia tsy nahita olana ara-teknika izahay, raha ny marina dia tena tsara ny traikefa.
Panel tena tsara sy traikefa multimedia tsara
Tsy maintsy manomboka amin'ny efijery iray isika 15,6 santimetatra amin'ny fanapahan-kevitra 4K izay mampiasa tontonana LCD IPS namboarina tsara amin'ny lafiny loko, tsy misy hazavana leakage ary misy coating tsara mba hisorohana ny fisaintsainana tsy ilaina. Manana taham-pamelombelona 120 Hz izy io izany no mampifaly antsika milalao, eny, tsy ampy Webcam zavatra sarotra takarina amin'ny solosaina finday tahaka izao, nahoana ASUS?
Imput LAG: 3ms ambony indrindra
Ho azy ny ScreenPad Plus dia 14,1 santimetatra ary mazava ho azy fa tactile izy io, afaka miara-miasa aminy isika, mandray an-tsoratra na mampiasa azy io ho fanitarana ny desktop. Manana 3840 teboka izy io mitsivalana ary manana rafitra manainga mandeha ho azy amin'ny alalan'ny fampiakarana ny saron'ny solosaina finday izay manatsara be ny rivotra.
Ho an'ny ampahany, manana mpandahateny 4W roa miaraka amin'ny Smart Amp sy 2 2W sioka, manao azy avy hatrany ho iray amin'ireo solosaina finday tsara indrindra raha resaka feo, faharoa amin'ny Apple MacBooks. Izy io dia manohana ny feo Dolby Atmos ary koa ny teknolojia fanamafisam-peo.
Aura Sync ho an'ny jiro RGB
Mikasika ny fahaleovantena dia manana rafitra isika Li-ion 4 sela (90 WHrs, 4S1P) fa na dia ho ampy mandritra ny adiny telo na efatra mahery amin'ny automatique amin'ny birao aza izany, ny fitsapana ataontsika mandritra ny filalaovana dia miankina amin'ny zava-bita resahina. Tsy mendrika ny hieritreritra be loatra momba an'io lafiny io satria atolotra ny hilalao an-tserasera.
Mazava ho azy fa filokana azo antoka sy tsotra ity solosaina finday ity, saingy tsy maintsy ataonao izany mandehana amin'ny boaty, ny mihoatra ny 2.900 euros ny vidiny amidy dia mendrika ny grama rehetra amin'ity solosaina finday ity izay toa tsotra toy ny maka ny tsara indrindra amin'ny trano tsirairay ary mametraka izany ao anaty chassis tsara tarehy sy mahomby.
Navoaka tamin'ny: Novambra 10 avy amin'ny 2021
Famolavolana mahatalanjona sy hita maso
Fifandraisana ara-batana sy tsy misy tariby lehibe
Top fitaovana amin'ny lafiny rehetra
Tsy misy webcam
Ny module RAM dia tsy azo avela
Ny vidiny dia mety ho voarara
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Vaovao momba ny gadget » General » ASUS ROG Zephyrus Duo 15 SE GX551, kilalao izy io ary avo lenta [Fandinihana]